Danjiraha Jabuuti ee Soomaaliya oo xarigga ka jaray mashaariic uu madaxweyne Geelle ka hirgeliyay Beledweyne – Radio Muqdisho
Danjiraha Jabuuti ee Soomaaliya oo xarigga ka jaray mashaariic uu madaxweyne Geelle ka hirgeliyay Beledweyne
Wafdi uu hugaaminayo Safiirka Soomaaliya ee jabuuti ayaa xarigga ka jaray mashaariic uu maalgaliyay madaxwayne Gelle oo laga fuliyay Baladwayne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wafdigaan oo ka koobnaa Safiirrada waddamada Carabta u jooga Soomaalya, xubno ka tirsan golaha wasiirrada iyo Xildhibaanno uuna huggaaminayay Ambasador Dayid Dubad Rooble oo ah Safiirka Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya isla markaan ah hormuudka Safiirada jooga Soomaaliya iyo madaxa Safiirada wadamada carabta ayaa markii ay gaareen Baladwayne waxaa kusoo dhaweeyay masuuliyiinta maamulka Gobalkaas oo uu ugu horeeyo Gudoomiyaha Gobalka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax.
Mas’uuliyiintaan ayaa xariga ka jaray sadex Mashruuc oo uu maalgaliyay Madaxwaynaha Jabuuti Md Ismaaciil Cumar Gelle kuwaas oo kala ah Biyaxireen looga hortagayo in Wabigu kusoo fataho magaalada,dayactir lagu sameeyay qayb ka mid ah oo loogu talo galay Xafiisyo iyo Guryo ay dagaan ciidamada iyo guryaha martida oo iyana ladhisay lana qalabeeyay.
Wafdigu wuxuu aad ugu mahadceliyay Ciidamada Jabuuti oo ka hawlgala Gobalka Hiiraan ahna Ciidamada kaliya ee ka yimid wadan ka tirsan Jaamacadda Carabta ee qayb ka ah hawl-galka nabadda Soomaaliya ee Amisom.
Dadwaynaha Gobalka oo ay hugaaminayaan masuuliyaanta maamulka ayaa aad uga mahadceliyaya Madaxwayne Gelle iyo reer Jabuuti sida hagar la’anta ah ee ay maal iyo muruqba ula garabtaaganyihiin Soomaalida.
Ciidamada Jabuuti ayaa ku caawayay dadwaynaha Gobalka Hiiraan in ay helaan nabadda,waxeey kaloo ka hirgalisay Jabuuti Baladwayne Mashaariic kala duwan iyagoo ku gargaaray danyarta Raashin,daawo iyo biyo taas oo keentay in ay dadka gobalka u muujiyaan walaaltinimo dhab ah.
Wasiirka arrimaha gudaha oo ka warbixiyay go’aanno ka soo baxay kulamo uu cadaado kula qaatay guddiga farsamada